Uganda oo looga digay in ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya – SOOMAALPEDİA
Waxaa magaalada Kampala, gaar ahaan Madaxtooyada dalkaasi ku kulmay Madaxweyne Yoweeri Museveni iyo Wafdi ka socda Beesha Caalamka.
Kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa burburinta go’aanka ay Dowlada Uganda ka gaartay Ciidamada ka jooga Somalia, waxaana kulankaasi isla hogaaminaayay Museveni iyo Safiirka Maraykanka iyo Madaxa ergadda Yurub u jooga Kampala Deborah Malac iyo Kristian Schmidt.
Deborah Malac iyo Kristian Schmidt, ayaa Madaxweyne Yoweeri Museveni uga digay in xiligaani uu Ciidamadiisa kala soo baxo Somalia.
Deborah Malac iyo Kristian Schmidt waxa ay Museveni u sheegen in wakhtigaani ay Somalia ku jirto xili kala guur ah sidaa aawgeed ay ka digayaan in Uganda ay qalqal ku abuurto ciidamadeeda jooga Somalia.
Waxa ay sheegen in isbedel uu imaan doono, inta laga gaarayana ay dulqaad muujiso Uganda si aysan isaga soo dhexbixin Soomaalida oo ay ku adag tahay inay nabadgalyo sameystaan.
Museveni oo codsigaasi tix galinaaya ayaa sheegay inaysan Uganda marnaba ciiddankeeda kala soo bixi doonin Somalia, balse ay dib u eegayaan Hawlaha Ciiddanka Uganda ee loo daad-gureeyey Somalia.
Beesha Caalamka ayaa aad uga murugeysan faragalinta ay Dowlada Uganda ku sameyneyso nidaamka lagu maamulaayo Ciidamada AMISOM ee ka kala socda tirro dowlado Afrikaan ah.
Dhawaan ayey aheyd markii ay Dowlada Uganda shaaca ka qaaday in ay dib u eegeyso Hawlaha Ciiddanka Uganda ee loo daad-gureeyey Somalia.